Andry Rajoelina "Ho henjana ny sazin'ireo tsy manaja toromarika"
Coronavirus Mitombo isa ny maty ivelan’Analamanga
Olona 4 indray no lavon’ny Covid-19 raha ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly, ka nampiakatra ny isan’ny lavo hatramin’izay ho 156. Ny 02 tany amin’ny Faritra Boeny, 01 DIANA;
Coronavirus Hitan’ny Rosianina ny vaksiny
Vaovao nanakoako naneran-tany nanomboka omaly ny fanambaran’ny Firenena Rosianina fa nahita vaksiny hahafa-miady amin’ny valanaretina coronavirus. Ity no vakisinin'ny covid-19 nolazaina ampahibemaso voalohany, izay nomena ny anarana "Spoutnik V".
Amoron’i Mania Distrika 4 nahazo fitaovana hiadiana amin’ny Covid 19
Ireo Ministra mianadahy miahy ny Faritra Amoron i Mania dia ny Mpitahiry ny Tombokasem panjakana,
Fivoaran’ny coronavirus Mihena ny eto Iarivo, mitombo ny any amin’ny faritra
Olona iray teto amin’ny Faritra Analamanga no maty, ka nampiakatra ny isan’ny lavo hatramin’izay ho 152, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly. 115 kosa ny tranga vaovao,
Fanafodin’ny Coronavirus 106 000 000 Ar no natontona tamin’ny CSB II
Nanamafy ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka fa maimaimpoana ny fitsaboana (fizahana sy fanafody) ireo olona ahiahiana na voamarina fa mararin'ny "Covid-19",
Vatsy Tsinjo Mitohy ny fanisana ireo tokantrano eny Avaradrano
Anisan’ny faritra sahanin’ny Ministeran’ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetr’andro (MTTM), ny kaominina Sabotsy Nahemana, ao anatin’ny distrikan’Avaradrano.
Covid 19 Olona iray sisa tsaboina ao Fenoarivo atsinanana
Olona iray sisa tsaboina ao amin’ny CHRD Fenoarivo atsinanana, raha ny mikasika ny valanaretina COVID 19 no asian-teny,
Roa volana katroka ny fahamehana ara-pahasalamana. 117 no voa tao anatin'ny iray volana. Voafehy ny fiparitahana rehefa nanaja ny toromarika.
Niroso tamin’ny fanalefahana saingy roa herinandro farany teo, tafiakatra 283 no voa. Mampalahelo fa nisy namoy ny ainy iray efa taizana diabeta sy tosidrà. Niakatra ny tahan'ny diabeta dia nampidirina hopitaly, nikohaka,niakatra ny hafanana natao PCR voaporofo fa “positif”. “Cas grave” izy efa sempotra , tsy azo nomena CVO noho ny aretina mitaiza azy, hoy ny Filoham-pirenena Rajoelina izay nankahery ny fianankaviany. Tsy maintsy hentitra, tsy misy ny fifamezivezena ny faritra mankaty Antananarivo sy Antananarivo mankany amin'ny faritra. Io no mampitombo ny fiparitanan'ny aretina, ka mila mifampitaiza sy mitandrina ary mandray ny anjara adidy tandrify azy ny tsirairay avy na olom-boafidy na olom-boatendry na ny vahoaka tsirairay avy, hoy Rajoelina. Isika anefa efa nahita ilay fanefitra, mihazakazaka ny aty Afrika maka ny anjarany mba hisotro…. Tsy nisotro tambavy CVO avokoa ireo olona tratry ny Coronavirus faramparany, hoy izy. Mitohy ny fahamehana manerana ny nosy, mitohy mihatra ny fepetra amin'ireo faritra 3, mihatra amin'Alaotra Mangoro ihany koa. Ho hentitra ny famaizana ho an'ireo minia manao tsirambina. Atao avo roa heny ny fepetra ho raisina satria miditra ririnina isika.
HANANGANA LABOARATOARA SY FAMOKARANA FANAFODY
Miatrika ny fahavalo avy any ivelany sy ato anatiny isika, fizarazarana, fomba fiasa, hoy i Andry Rajoelina. Nanakiana ilay valim-pitilian’ny IPM 6 mey. 32/33 ny tapak'andro maraina, niampy 35 no nitondra ny tsimokaretina, ka 67 ny iray andro, kanefa 10 no tena voa rehefa naverina. Na inona na inona antony dia tsy azo ekena ny trangan-javatra tahaka izao, hoy i Andry Rajoelina. Tonga ny fotoana hiainantsika ny tena fahaleovantena marina… Hakana lesona sy hanamarina ny lalana hodiavintsika izao zavamisy izao; vonona hiara hiasa isika saingy tsy baikoan’ny avy any ivelany amin'izay safidintsika, hoy i Andry Rajoelina. Hanokatra toeram-pitiliana ho an'ny Malagasy eto Madagasikara isika, hanangana orinasa lehibe mpamokatra fanafody, ka hotokanana mialohan'ny 26 jona ny tetikasa. Tanjona ny mba haha maodely aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy Afrika ary manerantany i Madagasikara indrindra fa amin'ity ady amin'ny coronavirus ity, hoy ny filoha Andry Rajoelina.
Tsy nisy resaka nandritra ny kabarin'ny filoha ny momba ny datim-panadinana, ny fiahiana ireo sekoly tsy miankina.Tsy fantatra mazava ihany koa ny mety ho tohin'ny tohana ara-tsosialy ho an'ireo sahirana.Niandry vasoka ihany koa ny orinasa amin'ny sehatra tsy miankina fa na fehezanteny iray aza tsy nisy miantefa amin'izy ireo.